LinuxCapable - Loharano GNU/Linux Howtos Friendly anao
Arch Linux miorina
Miorina amin'ny BSD
Ahoana ny fametrahana HPLIP amin'ny Ubuntu 22.04 LTS
Navoaka tamin'ny: Zoma 20 Mey 2022
Ny tetikasa HPLIP dia natsangan'ny HP inc. mikendry ny hanamora ny mpitantana sy ny mpampiasa ny rafitra fandidiana Linux miaraka amin'ny…
Ahoana ny fametrahana Plex Media Server amin'ny Arch Linux
Ny Plex Media Server dia rindrambaiko hitahiry ny atiny media nomerika rehetra ary hidirana amin'ny alàlan'ny rindranasa mpanjifa toy ny fahitalavitra, NVIDIA Shield,…
Ahoana ny fametrahana PostgreSQL amin'ny Ubuntu 22.04 LTS
PostgreSQL dia rafitra fitantanana angon-drakitra azo antoka sy azo antoka izay efa nampiasaina nandritra ny 20 taona mahery. Tohanan'ny vondrom-piarahamonina mavitrika…
Ahoana ny fametrahana MariaDB amin'ny Ubuntu 22.04 LTS
Nohavaozina farany tamin'ny: Zoma 20 Mey 2022
MariaDB dia iray amin'ireo tahiry open-source malaza indrindra eo akaikin'ny mpamorona azy MySQL. Ny mpamorona ny MySQL tany am-boalohany dia namolavola an'i MariaDB ho valin'ny tahotra sao ho lasa serivisy karama tampoka ny MySQL ...
Ahoana ny fametrahana Visual Studio Code amin'ny LMDE 5 "Elsie"
Visual Studio Code dia tonian-dahatsoratra maimaim-poana sy mahery vaika nataon'i Microsoft ho an'ny Windows, Linux ary macOS. VSCode dia manolotra endri-javatra maro toy ny fanohanana ...
Ahoana ny fametrahana PowerShell amin'ny LMDE 5 "Elsie"
Microsoft PowerShell dia fiteny scripting be mpampiasa sy mitarika indostria izay azo ampiasaina amin'ny automatique. Matetika koa miaraka amin'ny teknolojia hafa toa ny CI/CD…
Ahoana ny fametrahana VSCodium amin'ny LMDE 5 "Elsie"
VSCodium dia sampana iray amin'ny Microsoft Visual Studio Code Editor novaina mba hanana fidirana malalaka malalaka. Ny kaody loharanon'ity vokatra ity dia azo jerena…
Ahoana ny fametrahana Opera Browser amin'ny LMDE 5 "Elsie"
Opera dia rindrambaiko maimaim-poana, mpitety tranonkala miampita sehatra novolavolain'ny Opera Software ary miasa toy ny mpitety tranonkala Chromium. Opera dia manolotra tranonkala madio sy maoderina izay…
Ahoana ny fametrahana XanMod Kernel amin'ny Pop!_OS 22.04 LTS
XanMod dia maimaim-poana, loharano misokatra malalaka Linux Kernel safidy ho an'ny kernel stock miaraka amin'ny Pop!_OS 22.04 LTS. Izy io dia manasongadina fandrindrana manokana sy endri-javatra vaovao ary…
Ahoana ny fametrahana GIT amin'ny Fedora 36 Linux
GIT dia rafitra fanaraha-maso dikan-teny maimaim-poana sy misokatra izay afaka mitantana tetikasa kely na lehibe. Izy io dia ahafahan'ny developer maro miara-miasa…
Ahoana ny fametrahana Redis amin'ny Fedora 36 Linux
Redis dia loharano misokatra (BSD nahazoan-dàlana), fitahirizana firafitry ny angon-drakitra manan-danja amin'ny fitadidiana ampiasaina ho toy ny angon-drakitra, cache ary broker hafatra. Redis dia manohana ny rafitra angon-drakitra toy ny tady, hashes, lisitra, seta, voafantina ...
Ahoana ny fametrahana Apache amin'ny ModSecurity amin'ny Ubuntu 22.04 LTS
ModSecurity, izay antsoina matetika hoe Modsec, dia firewall (WAF) maimaim-poana amin'ny tranonkala. ModSecurity dia noforonina ho modely ho an'ny Apache HTTP Server. Na izany aza, hatramin'ny andro voalohany,…
pejy1 pejy2 ... pejy80 Manaraka →
© 2021 - 2022 LinuxCapable ny zo rehetra voatokana.